Sawirro: Madaxweynaha Hirshabeele oo Beledweyne tababar ugusoo xiray ciidamadii ugu horeeyay ee uu yeesho maamulkiisa
arlaadi January 7, 2017 No Comments
Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeele Cali Cabdullaahi Cosoble oo maalmahaanba ku sugnaa magaalada Beledweyne ayaa waxa uu halkaas tababar ugusoo xiray ciidamadii ugu horeeyay ee uu yeesho maamulka Hirshabeele.
Munaasabad ka dhacday xerada Lamagalaay ee magaalada Beledweyne ayaa waxaa lagusoo bandhigay ciidamo u badan dhalinyaro lagasoo kala qoray beelaha wada dega magaalada ayada oo ay halkaas ku sugnaayeen taliyaha booliska gobolka Hiiraan, gudoomiyaha gobolka Cali Cismaan Jeyte iyo weliba maamulka degmada Beledweyne.
”Ciidamadani waxaan kasoo kala qornay beelaha wada dega gobolka Hiiraan, waxaana tababarka loo furay markaan imid halkaan kadib” sidaas waxaa yiri Cali Cismaan Jeyte, gudoomiyaha gobolka Hiiraan.
Gudoomiye Jeyte waxa uu dhanka kale sheegay innaan dhaqaale la heli karin haddii aan la helin ciidamo ka shaqeeya amniga islamarkaasna kala dambeynta soo celiya.
Dhankiisa madaxweynaha Hirsshabeele Cali Cabdullaahi Cosoble waxa uu sheegay in ciidamadani ay xaquuq ku leeyihiin maamulkiisa islamarkaasna ay u guntan doonaan inay wixii xaqooda ah ka helaan maamulka.
Madaxweyne Cosoble ayaa sheegay in dowladihii dalka soo maray ay gaarsiin waayeen maamulka degmo ilaa min tuullo sidaasna loogu baahday in la helo dowlad goboleedyo inkastoo uu maamulka Hirshabeele weli curdan yahay.
Ciidamada oo 100 ka mid ahi ahaayeen nabadsugid ayaa waxa ay xirnaayeen dhar caadi ah iyo weliba lebiska cayaartoyda Soomaaliya ku lebistaan ee astaanta qaran leh taasoo muujinayso inaysan jirin cid ka gacan siisay maamulka gobolka Hiiraan tababarida ciidamadaan.
Tan iyo markii xilka gudoomiyaha gobolka Hiiraan loosoo magacaabay Cali Cismaan Jeyte waxa uu la yimid fir fircooni iyo dadaal uu u galay dhisida goobaha dadweynaha sida xabsiga dhexe ee magaalada Beledweyne oo uu dayac fara badani ka muuqday hadana dib u dayactirid ku sameeyay.